Nin qabri uu gabadhiisa oo dhimatay u qodayay ka dhex helay gabadh kale oo nool - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaNin qabri uu gabadhiisa oo dhimatay u qodayay ka dhex helay gabadh kale oo nool
Nin qabri uu gabadhiisa oo dhimatay u qodayay ka dhex helay gabadh kale oo nool
Mumbai (JigjigaOnline) – Gabar yar oo mar dhow dhalatay ayaa iyadoo nool laga soo saaray qabri ay ku aasneyd, Waqooyiga dalka Hindiya, sida ay booliska shaaciyeen.
Sarkaal booliska ka tirsan oo lagu magacaabo Abhinandan Singh ayaa wariyeyaasha u sheegay in cunugta yar uu helay nin tuulada daggan, xilli uu damacsanaa inuu aaso gabar uu isaga dhalay oo geeriyootay daqiiqado yar ka dib markii ay dhalatay.
Gabadha yar oo lagu aasay qabri hoos u qodan qiyaastii 3ft (90cm), ayaa durbadiiba isbitaalka loola cararay, halkaas oo iminka lagu daweynayo, dhakhaatiirtuna waxay sheegeen inay xaaladdeeda soo hagaageyso.
Ciidamada booliska ayaa hadda billaabay howlgal ay ku baarayaan dhacdadan.
“Waxaan isku dayeynaa inaan helno waalidiinta dha;ay gabadha qabriga laga soo saaray, waxaana ka shakisannahay inay ka war qabaan sida ay wax u dhaceen, raallina ay ka ahaayen”, ayuu yiri Mr Singh oo la hadlayay warbaahinta gobolka Uttar Pradesh.
Sida uu sheegay taliyaha booliska ah, ninka reer tuulada ah ayaa qabri u qodayay meydka gabadhiisa.
“Iyagoo qabrigii qodis ku wada, oo oo hoos u gaaray ilaa 3 ft, ayuu badiilkoodii ku dhacay ashuun, wayna soo bixiyeen. haddii ay eegeen waxaa ashuunka ku jirtay gabar yar”, ayuu yiri Mr Singh, oo sharraxayay dhacdada.
“Booliska ayaa markiiba cunugta yar ula cararay isbitaalka, waana la daweynayaa”, ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Hindiya ayaa ka mid ah waddamada caalamka ee ay ka jirto sku dheellitirnaan la’aanta ugu badan ee ragga iyo dumarka. Haweenka ayaa inta badan lagu cunsuriyeeyaa dalkaas, gaar ahaan kuwa ka dhashay bulshooyinka saboolka ah.
Dadka u ol’oleeya in arrintaas lasoo afjaro ayaa sheega in dhaqanka ay bulshooyinka qaarkood heystaan ee wiilasha lagu doorbido uu sabab u noqday in la dilo malaayiin gabdho oo yaryar.
Inkastoo inta badan gabdhaha aan loo baahneyn uurkooda la iska soo xaaqo, iyadoo la kaashanayo dhakhaatiir sharcidarro ah, haddana wali waxaa jira gabdho badan oo marka ay dhashaan la dilo ama nolosha lagu aaso.
Yaa Iska Leh Facebook Page-ka Dadka Badan Ku Xidhan Yihiin Ee Mustafa Omer?
AKHRISO: “Walaashey oo aan sannado raadinayay ayaan albaabka igu xiga ka helay”